Sawirro: Booqashadii Obama ee Afrika
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa soo afjaray socdaal uu ku tagay seddex wadan oo Afrika. Obama ayaa booqday wadamada Senegal, South Africa iyo Tanzania. Share:
Dayaaradda Madaxweyne Obama oo ka soo kicitimeysa dalka Tanzania, iyadoo uu madaxweynuhu soo afjaray socdaalkiisii Afrika.
Madaxweyne Obama ayaa madaxa ku ciyaaraya kubad ka sameysan qalab koronto dhaliya oo lagu kaarikeeyo taleefanada gacanta lehna awood lagu daaro nalalka, isagoo booqanayay Shirkadda Korontada ee Ubungo oo soo bandhigaysay hormar dhanka korontada ah, Dar Es Salaam, July 2, 2013.
Gabdho dhalinyaro ah iyo haween xiran guntiinooyinka hiddaha iyo dhaqanka oo lagu magacaabo "Khanjas" uuna ku sawiran yahay Madaxweyne Obama oo safan aqalka madaxtooyada ee magaalada Dar es Salaam, Tanzania, July 1, 2013.
Madaxweyne Obama oo lagu soo dhaweynayo magaalada Dar es Salaam, Tanzania.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo madaxweynaha Koofur Afrika Jacob Zuma oo si wadajir ah shir jaraa'id u qabtay, ka dib kulan ay ku yeesheen guriga Union Building ee Pretoria, Koofur Afrika, June 29, 2013.
Ahmed Kathrada oo ay Nelson Mandela horey xabsiga u wada galeen ayaa waxa uu Barack Obama iyo qoyskiisa la taagan yahay baanaanka xabsiga Robben Island oo uu ku xirnaan jiray Nelson Mandela.
Madaxweyne Barack Obama oo indha-indheynaya qolkii uu Mandela kaga xirnaa Xabsiga Robben Island ee dalka Koofur Afrika.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo Madaxweynaha Senegal Macky Sall oo is gacan qaadaya, ka dib markii ay shir jaraa'id oo wadajir ah ku qabteen magaalada Dakar ee dalka Senegal.
Dad soo dhoobtay hareeraha wadada ay soo marayaan gawaarida galbineysa Madaxweyne Obama oo kulan magaalada Dakar kula yeelanaya madaxweynaha wadanka Senegal Macky Sall, June 27, 2013.